FBSစတားပြိုင်ပွဲကြီးစတင်ကျင်းပတော့မည့်အကြောင်းကို ကြေငြာပြောကြားရတဲ့အတွက် FBSမှဝမ်းသာပျော်ရွှင်ရပါသည်!
FBSတီရှပ်ဝတ်ဆင်ထားသော သင့်ရဲ့ဓာတ်ပုံသည် ပျော်ရွှင်ဖွယ်၊ လှပဆန်းသစ်တဲ့ဓာတ်ပုံမျိုးဖြစ်တဲ့ဓာတ်ပုံကို ကျွန်ုပ်တို့ကမြင်တွေ့ချင်မိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ခပ်မြန်မြန်လေးလုပ်ဆောင်လိုက်ပါ! သင့်ရဲ့Personal areaရှိပရိုမိုးရှင်းစာမျက်နှာတွင် FBSတီရှပ်ဝတ်ဆင်ထားတဲ့ သင့်ရဲ့အကောင်းဆုံး အလှဆုံးဓာတ်ပုံကို အပ်လုပ်ဒ်တင်လိုက်ပြီး ငွေသားဆုလက်ဆောင်များရယူလိုက်ပါ!
Likeအများဆုံးရရှိသူ သုံးယောက်အား ပထမဆု၊ ဒုတိယဆု၊ တတိယဆုအဖြစ် ဒေါ်လာ၅၀၀၊ ဒေါ်လာ၃၀၀ နှင့်ဒေါ်လာ၂၀၀တို့ကိုအသီးသီးချီးမြှင့်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ FBSဒိုင်အဖွဲ့မှရွေးချယ်ပေးသွားမည့် အထူးဆုအမျိုးအစား ၁၂ခုတွင် ဆုရရှိသူတို့ကိုလည်း ဒေါ်လာ၅၀စီအသီးသီးဆုချီးမြှင့်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကို အလွန်မြင်တွေ့ချင်နေမိပါပြီ!